घरको यो दिशामा राख्नुहोस् यस्तो धातुको कछुवा, अवश्य चम्किनेछ तपाँईको भाग्य ! – List Khabar
Home / जीवनशैली / घरको यो दिशामा राख्नुहोस् यस्तो धातुको कछुवा, अवश्य चम्किनेछ तपाँईको भाग्य !
घरको यो दिशामा राख्नुहोस् यस्तो धातुको कछुवा, अवश्य चम्किनेछ तपाँईको भाग्य !
admin February 12, 2022 जीवनशैली Leaveacomment 54 Views
काठमाडौँ । वास्तु शास्त्रमा कछुवाको निकै ठूलो महत्व छ । फेंगशुई वास्तुका अनुसार कछुवामा नकारात्मक इनर्जीलाई नष्ट गरेर सकारात्मक इनर्जी बढाउने शक्तिको रुपमा मानिन्छ । हरेक दिशाको सम्बन्ध एउटा कुनै न कुनै खास धातुसँग हुनेछ । वास्तुका यही सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखी आफ्ना भिन्न मनोकामनाका लागि भिन्न दिशामा भिन्न प्रकारको धातु राखिन्छ । यसले घर परिवारको सबै तनाव नष्ट गरिदिन्छ ।
आजकाल बजारमा विभिन्न धातुबाट बनेका विभिन्न आकार र रंगका कछुवा पाइन्छ । फेंगशुई वास्तुलाई आधार बनाएर तपाईंले आफ्ना भिन्न इच्छा पूरा गर्न विभिन्न आकार प्रकारका कछुवा भिन्न दिशामा राख्न आवश्यक छ ।
सन्तान जन्माउनका लागिः यदि कुनै घरमा सन्तान छैन भने सन्तान प्राप्तिका लागि एउटा विशेष प्रकारको कछुवा राख्न आवश्यक छ । एउटा ठूलो कछुवाको पिठ्युमा अर्को साना बच्चा कछुवा पनि भएको कछुवा घरमा राख्नाले सन्तान प्राप्त हुन्छ ।
धन प्राप्तिका लागिः कछुवालाई धन प्राप्तिको सूचक पनि मानिन्छ । यदि कसैलाई धनसम्बन्धि तनाव छ भने त्यस्ता व्यक्तिले क्रिस्टलले बनेको कछुवा आफ्नो कार्यस्थल र धन सञ्चय गर्ने ठाउँमा राख्न आवश्यक छ ।
व्यवसायमा सफलताका लागिः व्यवसाय र अफिसमा लगातार भइरहेको नोक्सानीलाई रोक्नका लागि र सफलताको अवसर पाउनाका लागि मेटलले बनेको कछुवा आफ्नो पसल, अफिस र बेडरुममा राख्न आवश्यक छ ।
रोगबाट बच्नका लागिः यदि घरका कुनै न कुनै सदस्य लगातार बिरामी भइरहन्छन् भने यसबाट बच्नका लागि माटोले बनेको कछुवा घरमा राख्न आवश्यक छ ।
नयाँ व्यापार सुरु गर्नका लागिः यदि तपाईंले नयाँ व्यापार सुरु गर्नुभएको छ अथवा राख्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने चाँदीले बनेको कछुवा राखेमा यो निकै शुभ मानिन्छ । यस्तो गर्दा व्यापारमा कसैको खराब नजर लाग्दैन ।
परीक्षामा सफलता पाउनका लागिः आजकाल बच्चाका साथै ठूला मानिसहरु पनि अफिसमा प्रोमोशन पाउनका लागि परीक्षाको तयारीमा लाग्ने गर्दछन् । यस्तो अवस्थामा पित्तलले बनेको कछुवा तपाईंलाई सफल बनाउन सहयोग गर्दछ ।
झगडा समाप्त गर्नका निम्तिः यदि घरको सदस्यमा धेरैजसो लडाई झगडा भइरहन्छ भने घरमा कछुवाको जोडी राख्न आवश्यक छ । यस्तो गर्नाले घरका सदस्यबिच चलिरहेको मनमुटाव सिद्धिने र माया पिरती बढ्नेछ
Previous के तपाईलाई छिटो-छिटो पि-साब लाग्ने समस्या छ ? यसरी गर्नुहोस् घरेलू उपचार
Next बिरामीलाई किन हिस्टेरिया भनेको मन पर्दैन ?